Laanta Socdaalka oo ka hadashey go'anka Sharci siinta ee Caruurta iyo Xaquuqdooda Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaLaanta Socdaalka oo ka hadashey go’anka Sharci siinta ee Caruurta iyo Xaquuqdooda
Laanta Socdaalka oo ka hadashey go’anka Sharci siinta ee Caruurta iyo Xaquuqdooda
February 17, 2021 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden, Warka ugu akhriska badan 0
Hay’adda Socdaalka waxay ku daabacday Bogeeda bayaan cad oo ku saabsan heshiiska xuquuqda carruurta iyo saamaynta ay ku leedahay kiisaska magangalyo-doonka.
Hay’adda laanta socdaalka ayaa carabka ku adkeysay in heshiiska xuquuqda caruurta uusan ka dhigneyn in caruurta oo dhami ay xaq u leeyihiin inay deganaansho ka helaan Iswiidhan.
Waxay tilmaamtay inay heshay su’aalo badan oo ku saabsan mowduucan, gaar ahaan kadib markii ay xukun ay soo saartay maxkamada racfaanka laanta socdaalka kiis ku saabsan ilmo yar oo 14 jir ah oo loogu hanjabay in la masaafurin doono, maadaama maxkamadu xukuntay inuu sii joogo Iswiidhan isla markaana siiso degenaansho ku saleysan heshiiska xuquuqda carruurta.
Hay’addu waxay sharraxday in Maxkamadda Rafcaanka ee Dacwadaha Soogalootiga ay tixgelisay in canugga uu xiriir adag la leeyahay Sweden, maadaama uu ku dhashay kuna barbaaray halkan, sidaa darteedna aysan habboonayn in la masaafuriyo, iyadoo la xaqiijinayo inuu si wanaagsan ugu hadlo luuqadda Iswiidhishka, iyo inuu la noolyahay qoyskiisa iyo asxaabtiisa Sweden madaama uusan ehel ku laheyn banaanka.
Bayaanka ayaa lagu xusay in isku dheelitir lagu sameeyay go’aankaan inta udhaxeysa waxa looga baahan yahay danta ilmaha sida ku xusan heshiiska xuquuqda caruurta, iyo xiisaha dowlada Sweden ee dhanka socdaalka abaabulan.
Gabagabadii bayaanka, wakaalada socdaalka waxay carabka ku adkeysay in heshiiska xuquuqda caruurta uusan ka dhigneyn in caruurta oo dhami ay xaq u leeyihiin inay deganaansho ka helaan Iswiidhan, iyadoo la tixgalinayo in xaquuqdaas ay tahay in la waafajiyo sharciga ajaanibta. dalka iyo sidoo kale sharciga socdaalka ku meel gaarka ah, iyada oo la tixgelinayo jiritaanka sababo gaar ah oo loogu talagalay carruurta marka la barbar dhigo Kuwa kale ee ka tirsan kooxaha da’da kale